Nin Xaaskiisa Dhegaha ka Jaray,Dhacdo Layaab Leh.! |
Nin Xaaskiisa Dhegaha ka Jaray,Dhacdo Layaab Leh.!
Haweeney 23 sano jir ah oo u dhalatay dalka Afqaanistaan ayaa BBC-da u sheegtay in seygeeda uu xidhxidhay oo uu ka jaray labada dhagood kaddib muran ku saabsan arrimaha qoyska. Arrintan ayaa ka dhacday gobolka Balkh ee ku yaalla woqooyiga dalkaasi.
Haweeneydan oo lagu magacaabo Zarina ayaa hadda lagu soo waramayaa in xaaladdeeda ay caadi tahay basle ay maskaxiyan isku buuqsan tahay. Waxa ay sheegtay in aysan gelin wax dambi ah ayna ogaynba sababta uu ninkeeda dhibkan ugu gaystay. Booliska dalkaasi ayaa warbaahinta gudaha u sheegay in ninka falkan geystay uu u cararay dhanka degmada Kashinda oo uu hadda ku dhuumaaleysanayo. Zarina ayaa warbaahinta Pajhwor u sheegtay in ninkeeda uu hurdo ka soo kacay oo uu dhibkaasi u gaystay iyada oo aysan dhicin wax muran ah oo dhex maray, waxa ayna BBC-da u sheegtay muddo dheer uu aad u xumaa xiriirka iyaga iyo ninkeeda.
Wareysi ay siisay telefishinka Tolo ayaa Zarina waxa ay ka cabatay in ninkeeda uu isku dayay in uu ka horjoogsado in ay booqato waalidiinteeda. Waxa ay intaasi ku dartay inaysan doonayn in ay nolol dambe ay wadaagaan.